ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: မိန်းမ... မိန်းမ ဆိုတာ
မိန်းမ... မိန်းမ ဆိုတာ
မိန်းမရယ်လို့ လူ့လောကမှ ဖြစ်လာရင် ကျွန်မတို့ မိန်းမသား များမှာ ဘာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေသလဲ။ အဲလို အခွင့်အရေးတွေကို ထိုက်ထိုက် တန်တန် မငြူမစူ ရနိုင်ဖို့ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေကိုလဲ ရရှိ ပိုင်ဆိုင် ထားဖို့ လိုသလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ဖြစ်တဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အမေ၊ ကြီးတော်၊ အမ၊ နှမ စတဲ့ ဆွေမျိုး တော်စပ်မှု တခုခု မရှိရင် ချစ်သူ၊ ဇနီး မယား၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်၊ အလုပ်ရှင်၊ ၀န်ထမ်း တို့ထဲက တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပြီး အဲလို ဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်း တစ်ရပ်ရပ် မရှိဘဲ ပတ်သက် နေရင် ပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ကျမ်းကြီး ကျမ်းခိုင် များမှာ ပြဆိုတဲ့ မိန်းမ အမျိုး ၂၀ တို့က အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်..
အုပ်ထိန်းခြင်း ရှိသော မိန်းမ ၂၀။ ။ အုပ်ထိန်းခြင်းရှိသဖြင့် ယောက်ျားတို့ မသွားလာအပ်သော မိန်းမ ၂၀-ဟူလို။
မှတ်ချက်။ ။ ၎င်း ၈-ယောက်သောမိန်းမတို့ကား သူတို့မှာ ကံမထိုက်၊ သွားလာလွန်ကျူးသူ ယောက်ျား များမှာသာ ကံထိုက်သည်ဟူ၏။
ဇနီးမယားမြောက်ကြောင်း ဆယ်ပါး(၁၁) ဓနက္ကီတာ- ဥစ္စာဖြင့်ဝယ်ယူလျက် မယားအဖြစ်ထားသောမိန်းမ၊
(၁၄) ပဋ၀ါသိနီ- ပုဆိုးပေး၍ ]]ပုဆိုး တန်းတင်}}ပြု၍နေသောမိန်းမ၊
(၁၅) သြဒ ပတ္တကိနီ- ရေခွက်၌ လက်ဆုံချ၍မိဘနှစ်ပါး ထိန်းမြားပေးသောမိန်းမ၊
မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းင်း ၁၂-ယောက်သောမိန်းမများကို သွားလာလွန်ကျူးခဲ့မူ လင်ရှိမယားဖြစ်၍ မိန်းမရော ယောက်ျား ပါ နှစ်ဦးစလုံး ကံထိုက်သည်ဟူ၏၊ အကျယ်ကိုလိုမူ ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာဋီကာ။ အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ မူလဋီကာမှာ ရှုပါလေ။
ဇနီးမယား အဆင့်မှာ မရှိဘဲ အောက်ကို တဆင့်နိမ့်တဲ့၊ လူုလေးစားလည်း မခံရတဲ့ မယား ၆မျိုးလဲ ရှိပါ သေးတယ်။ မိန်းမများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူလေးစား တန်ဖိုးထား ခံချင်ရင် ဘယ်မိန်းမ အမျိုးအစား ဖြစ်အောင် နေမလဲ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် ကျင့်ကြံ နိုင်ပါတယ်။
အပြောင်မယား ၆-ပါး။ ။ ဓမ္မသတ်ပေါင်းချုပ် ပ-အုပ်။ ပုဒ်မ ၁၆။ ၁၈။ အမွေခံထိုက်သော သားခြောက်ပါး အရမှ ယူပြသည်။
(၆) ငွေကြေးမစပ် အလွတ်မိန်းမကိုသိမ်းသောအပြောင်။
မှတ်ချက်။ ။ အဋ္ဋသင်္ခေပ- ပုဒ်မ ၂၂၈။ မနုကျယ် ဒသမတွဲ ပုဒ်မ ၄၂တို့၌လည်းဆိုကုန်၏။
အထက်ပါ မိန်းမများထဲက ဇနီးမယားနဲ့ အပြောင် မယားများကို သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့် စာရိတ္တ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ နေထိုင်ပုံ တို့ကို မူတည်ပြီး မယား ၇မျိုး ပြန်ခွဲပါသေးတယ်။
မယား အပြား ၇-ပါး။ ဍ။ သတ္တင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်။ ၄၆၆ ။ဋ္ဌ။ ၁၇၇။ ဇာတ်ပါဠိတော်။ ပအုပ်။ ၇၈ ။ဋ္ဌ။ ၃၁၃-တို့၌ အကျယ်ရှုပါ။ ၎င်းသရုပ်ကို မဃဒေ၀ လင်္ကာစကားရပ်ဖြင့် သိရာ၏။
မယားခုနှစ်မျိုး၊ ရှိမြဲရိုးတွင်၊ သူခိုးအရှင်၊ လူသတ်သွင်သို့၊ အကြင်မယား၊ လား၏ငရဲ၊ အမြဲမှတ်ဘိ၊ အမိ တမျှ၊ နှမ မယွန်း၊ ခင်ပွန်းတသွယ်၊ ကျွန်နှယ်လေးဖြာ၊ မယားမှာကား၊ နိမ္မာနတ်ပြည်၊လားမြဲမည်၏၊ ယင်းသည် လေးသွယ်၊ မယားဝယ်လည်း၊ ကျွန်နှယ်အလား၊ ထိုမယားမူ၊ ယောက်ျားဆုပန်၊ နိဗ္ဗာန်ဆုကောင်း၊ တောင်းက မလွတ်၊ မချွတ်တူတည်၊ ပြည့်မြဲမည်၏။
အဲသည် မိန်းမများကတော့ လင်ကို သတ်ဖို့ အားထုတ်သူ၊ လင်က အပ်နှံ ထားတဲ့ မိသားစု အိမ်ထောင်ပိုင် စည်း စိမ် ဥစ္စာများကို လင်မသိအောင် သူတပါးကို ခိုးပေးတတ်သူ၊ လင်ကို ကျွန်လို ခိုင်းသူ သုံးမျိုးဟာ ငရဲ ရောက်ရ ပါတယ်။ လင်ကိုချစ်ခင် ပြုစုရာမှာ သားလို ပြုစုချစ်ခင်သူ၊ လင်ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေ ရာမှာ နှမ တစ်ယောက် လို နေသူ၊ လင်နဲ့ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက် အဆွေခင်ပွန်းသဖွယ် ဖြစ်သူနဲ့ လင်ကို ကျွန်လို ပြုစုသူ မိန်းမ လေးမျိုးကတော့ နတ်ပြည် လားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ဟောခဲ့သော တရားပါ။
အဲလို ဇနီးမယား ဆယ်ပါး၊ အပြောင်မယား ၆ပါး တို့ထဲကမှ မြင့်မြတ်သော မိန်းမ များရဲ့ အရည်အသွေးကို ‘သည်လို ပြဆိုထားပါတယ်။
မယားမြတ် ၈-ယောက် ။ လောကီကျမ်းလာ ဥပဒေသ။
(၁) ထမင်းစားသောအခါမိခင်ကဲ့သို့ ပြုစုလုပ်ကျွေးတတ်သောမယား၊
(၂) လင်ကို အ၀တ်အစားပြုပြင်ဆင်ယင်၍ပေးတတ်သောမယား၊
(၃) လင်ကို ပကတိအခါ၌ မောင်ကဲ့သို့ ရိုသေ ရှက်ကြောက် တတ်သော မယား၊
(၄) လင်ကို ကျွန်မ သဖွယ် လုပ်ကျွေးတတ်သောမယား၊
(၅) ဘေးရန်ရှိသောအခါအတိုင်အပင်ရသော မယား၊
(၆) ကာမကိစ္စ၌ လင်၏ မွေ့လျော်ဘွယ်ကို ပြုကျင့်တတ်သောမယား၊
(၇) အရောင်အဆင်း၏ တင့်တယ် လှပခြင်းကို ပြုပြင် ဖီးလိမ်းတတ်သော မယား၊
(၈) လင်၏ အလို၌ သည်းခံနိုင်သော မယား။
မယားမြတ်တို့ အကျင့်လက္ခဏာ ၆-ပါး။ ။မိန်းမမြတ်တို့ လိုက်နာပြုကျင့်ခြင်းအလေ့မြတ် ၆-ပါး ဟူ၏၊ (မဟာ သုဒဿနသုတ် ပါဠိတော်မှ။ )
(၁) ပုဗ္ဗုဋ္ဌာယီ- ရှေးဦးစွာအိပ်ယာမှ ထလေ့ရှိခြင်း၊
(၂) ပစ္ဆာ နိပါတီ- နောက်မှ အိပ်လေ့ရှိခြင်း၊
(၃) ကိံကာရ ပဋိဿာဝိဏီ- ပြုလုပ်ပေးရန် လင့် အသံစကားကို အသင့်နာခံလေ့ရှိခြင်း၊
(၄) မနာပ စာရီ- နှစ်ခြိုက်ဘွယ်ကိုပြုလေ့ရှိခြင်း၊
(၅) ပိယ ၀ါဒိနီ- ချစ်ဘွယ်စကားကို ဆိုလေ့ရှိခြင်း၊
(၆) မနာသာပိ နောအဘိစာရီ- ယောက်ျားတပါးကို စိတ်ဖြင့်မျှ မကြံစီ မလွန်ကျူး နေလေ့ရှိ၏။
မယားဝတ် ၅-ပါး။ ။အိမ်ထောင်ရှင်ခေါ် မယားလုပ်သူတို့ ပြုကျင့်ရမည့် ၀တ်ငါးပါး။
(၁) အိမ်တွင်းမှု ပြုဘွယ်တို့ကို စေ့ငှစွာ ဉပလုပ်ရခြင်း၊
(၂) လင်ရှာ၍ ရသော ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစုဆောင်းမိအောင် သိမ်းတတ်ရခြင်း၊
(၃) မိမိလင်မှ တပါးယောက်ျားကို မတပ်မက်မနှစ်သက်ရခြင်း၊
(၄) မိမိဆွေမျိုး လင်၏ဆွေမျိုးတို့ကို လျော်သလို ပေးကမ်းဖြန့်ချီရခြင်း၊
(၅) အပျင်းမထူ အိမ်သူပြီလှစွာ နေထိုင်ရခြင်း။
သည်လို အကျင့်အမူ ရှိတဲ့ ကျင့်ဝတ် ရှိတဲ့ မိန်းမကိုမှ တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ လူမိုက်ယောက်ျားကိုတော့ စွန့်ပစ် ဖို့ နှမြောစရာ မလိုပါဘူး။ သို့သော် အိမ်ထောင်သည် ဇနီး မယားတို့ရဲ့ တာဝန်ကိုတော့ ကိုယ်က အရင် ကျေပွန် ပြဖို့ လိုပါတယ်။ လင်ယောက်ျားက စွန့်ပစ်တာ ခံသင့်တဲ့ မိန်းမ ငါးမျိုးကိုလဲ သည်လို ပြဆို ထားသေးတာ တွေ့ရပါမယ်။
မယား ၅-ပါး၊ ပယ်စွန့်ထား၊ မိန့်ကြား ဓမ္မသတ်။ ။ ကွာစွန့်အပ်သော မယား ငါးပါး ဟူ၏၊ ရှေ့ ၃-ပါးကို မကွာလိုကလည်း နေနိုင်သည်၊ က၀ိလက္ခဏာ ဒီပနီကျမ်းမှ။
(၁) မြုံသောမယား၊ ရှစ်နှစ် ငံ့စောင့်ရမည်၊
(၂) သ္မီးမိန်းမသာ ဖွားသောမယား၊ ရှစ်ယောက် ဆယ်ယောက်အထိ မွေးအောင် စောင့်ငံ့ရမည်၊
(၃) နူသောမယား၊ ကွာလိုက ကွာစေ၊
(၄) လင်စောင် မျောက်မ ထားသော မယား၊
(၅) အမျိုးတို့၏ အကျင့်တရားကဖျက်သော မယား။
လင်ယောက်ျားရဲ့ နေရာကနေ ကြည့်ရင်လဲ လင့်ဝတ္တရား ငါးပါး ကျေပွန်သူ ယောက်ျားအတွက် အသက်၊ သွေးချွေး ရင်းပြီးလဲ ရှာကျွေးရသေး၊ ဗနာက်ပိုင်းကလဲ သစ္စာဖောက်သေးဆို ဘယ်လောက် နာကျည်း ခံပြင်းစရာ ကောင်းလိုက်မလဲ စဉ်းစား ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကာမေသု ကံမြောက်တဲ့ အင်္ဂါရပ် လေးပါးကတော့ ကာမကိစ္စ၌ ကံမြောက်နိုင်သည့်အင်္ဂါလေးပါး။
မေထုန် မမှီဝဲ အပ်သော မိန်းမ ၁၄-ပါး။ ။ထို ဆယ့်လေးယောက်တို့တွင် အချို့ကား ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေ၍ အချို့ကာ ဘာသာတရားနှင့် လောက၀တ် ဥပဒေများက တားမြစ်၍ အပြစ်ရှိသည်၊ အမရိတ ဘေသဇ္ဇကျမ်းမှ၊
(၃) ညစ်နွမ်း မသန့်စင်သူ
(၁၁) အင်္ဂါဇာတ်၌ အနာရှိသူ
(၁၃) မာတုရက္ခိတ စသည်ရှိသော မိဘ မောင်ဖွား ဆွေမျိုးညာတိ ရပ်ရွာက စောင့်ရှောက်ထားသူ
ထိုမိန်းမတို့တွင် မိမိရဲ့ တရားဝင် ဇနီးပင် ဖြစ်စေ ကျူးလွန် ပါက ကာမေသု ကံမြောက်လေသည်။
အုပ်ထိန်းရာသော မိန်းမ၂၁-ပါး။ ။ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှု အမြဲရှိနေအပ်သော မိန်းမမျိုးနှစ်ကျိပ်တစ်ပါး ဟူ၏။ ဓမ္မသတ်မှ။
(၄) ကိုယ်ဝန်ရှိသော မိန်းမ၊
(၅) အရွယ်မရောက်သေးသော မိန်းမ၊
(၇) မြီကိုလို၍ ချုပ်ထားသောမိန်းမ၊
(၈) အဘ စောင့်သောမိန်းမ၊
(၉) အမိ စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၀) အဘိုး စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၁) အဘွား စောင့်သော မိန်းမ၊
(၁၂) အစ်မ စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၃) ညီမ စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၄) မောင်ကြီး စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၅) မောင်ငယ် စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၆) မိကြီးစောင့်သော မိန်းမ၊
(၁၇) မိထွေးစောင့်သော မိန်းမ၊
(၁၈) ဘကြီး စောင့်သောမိန်းမ၊
(၁၉) ဘထွေး စောင့်သောမိန်းမ၊
မှတ်ချက်။ ။ ဤနှစ်ကျိပ် တစ်ပါးသော မိန်းမများအနက် တစ်ဦး တစ်ယောက် သော မိန်းမ ကပင် မိမိ၏ ကာမကို သဘောတူ ပေါင်းသင်းရန် ပေးသော် လည်း အုပ်ထိန်းသူတို့၏ အခွင့်ကို မရဘဲ ပေါင်းသင်းသော ယောက်ျားအား ကြီးလေးသော အပြစ်ဒဏ်ကို ပေးရမည်ဟု မနုကျယ် ဓမ္မသတ် ဆဋ္ဌမတွဲ ပုဒ်မ ၂၈-တွင် ဆိုလေသည်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 8:45 AM
Oh! looksabut likeamuslim woman!!
၀ါကျက မပြည့်စုံတော့ ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်း မသိလို့ပါ မေမြန်မာရေ.. ဒီစာတွေက အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် တွေက မိန်းမကို ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ပုံ မဟုတ်ပါဘူး ရှေး မြန်မာ့လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းမှာ မိန်းကလေးတွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အ၀ ပေးခဲ့တဲ့ ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက် လောကနီတိ ကျမ်းတွေထဲက ကောက်နှုတ်တာပါရှင်။ မိန်းမ အမျိုးအစား သတ်မှတ် ခွဲခြားထားပေမယ့် တကယ်သိလို့ လိုက်နာနိုင် ရှောင်နိုင်ရင် မိန်းကလေးတွေအတွက် တကယ့်ကို လုံခြုံ စိတ်ချ ရမှုကို ပေးနိုင်ပါတယ် တာလုံတော့ ခံစစ် ကောင်းတာပေါ့နော